Fatigue Archives — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
manyaro manyaro manyaro manyaro manyaro manyaro manyaro manyaro manyaro manyaro manyaro manyaro manyaro manyaro
Ko vakundi somunhu? Vari varefu kana pfupi? Black kana chena? Strong kana simba? Ndinofunga zvinoe- chii isu airevei “mukundi.”
Ndakanga vakanwa kupinda nyaya mumwe mukundi mwedzi uku kare somunhu kuverenga yakareba, asi vave nechekuita Biography waMikaeri Jordan. Nhoroondo hwakadzama ichindiudza nei Kuramba vanhu vakawanda naye muganhu kunamata gamba. Zvinhu zvakawanda zvinogona kutaurwa pamusoro “ake airness” asi hapana aigona akambotaura iye asiri mukundi. Aitarisira sezvinoita weNobel asati awana avo vose Championship zvindori, Zvisinei?
Sezvaunoverenga bhuku, zvaiita pachena kubva achiri muduku kuti aizova shasha. Kunyange zvakanga hunoshamisa mutambo wake sezvo zvishoma sungano chirongo kana somunhu mudiki varsity Basketball mutambi; ake chesekondari kukura ashingaire chaizvo kana ake mutambo richakunda vapfurwa panguva yake freshman gore pamwe UNC.
Pakazosvika nguva ndakasvika muzvitsauko pamusoro Championships ake ave Chicago Bull, pakanga pasina zvinoshamisa. Munyori akaudza nyaya yake nenzira akaita kuti pachena: Jordan akazvarwa kuva mukundi. Uye ndizvo zvatinoziva kwaari: kuhwinha nhanhatu Championship zvindori, MVPs shanu, uye 14 All Star kuonekwa…